हुँदै छ त गरिबी निवारण ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
हुँदै छ त गरिबी निवारण ?
योगेश ढकाल/ सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी ४६ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, ती कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट होइन, अन्य १४ मन्त्रालयबाट सञ्चालित छन् ।देशभर करिब ६१ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७० मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन छ । ती गरिबको गरिबी निवारण गर्न बनेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबका लागि एउटा कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । करिब १ अर्ब ६७ करोड बजेट रहेको मन्त्रालयले पश्चिमी उच्च पहाडी जिल्ला गरिबी निवारण कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रम बझाङ, बाजुरा, दैलेख, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा र रुकुममा सञ्चालित छ ।
१) गरिब घरपरिवार पहिचान
सरकारले असोज मसान्तभित्र २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न र पहिचान भएकालाई परिचयपत्र वितरण गरिने निर्णय गरेको थियो । गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डले माघ अन्तिम साता मात्र काम सकेको छ । बोर्डले २५ जिल्लाका करिब तीन लाख ९४ हजार जनसंख्यालाई गरिब भनेर पहिचान गरेको छ । तर, बोर्डको बैठक बसी औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
२) गरिबी निवारण नीति बनाउँदै
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलायले गरिबी निवारण नीति मस्यौदा बनाउँदै छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले मस्यौदामाथिको छलफल यसै साता टुंगिने बताए । मस्यौदाको अन्तिम टुंगो लागेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ ।
३) गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम बनेन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १९ असोजमा गरिबका लागि सरकारी कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कायालयमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालनबारे छलफल भएको थियो । गरिबका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा विस्तृत कार्ययोजना पेश गरेको थियो ।
४) राष्ट्रिय सहकारी ऐन
राष्ट्रिय सहकारी ऐन संसद्को अर्थ समितिमा पुगेको छ । सहकारीको सुशासन, स्वनियमन र आन्तरिक नियन्त्रणका लागि सहकारीमा रहेका पदाधिकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने गरी मस्यौदा बनेकाले सांसद रहेका सहकारी सञ्चालकले यसको विरोध गरेका छन् ।
५) यी पनि गर्दैछ मन्त्रालयले
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरि सञ्चालनमा रहेका करिब ३३ हजार सहकारीमध्ये उत्पादनमा लागेका सहकारीको सहजीकरणका लागि भण्डारकेन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानका अनुसार चितवनको भरतपुर र ललितपुरको लगनखेलमा बजारका लागि सहकारी कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने तयारी छ ।
सहकारीहरूलाई अनुदान वितरणका लागि कार्यविधिसमेत मन्त्रायले बनाएको छ । ‘पहिला दुई-तीन करोड रूपैयाँसम्म सहकारीलाई दिन सकिने व्यवस्था थियो, तर अहिले कार्यविधि बनाएर ३० करोडसम्म पुर्याएको छौं,’ प्रधानले भने । उनका अनुसार त्यस्तो रकम सहकारी डिजिजन कार्यालयबाट नै दिइनेछ । नयाँ पत्रिका